ရောင်းကောင်းလာတဲ့ ကော်ဖီမစ်တွေ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Food, Drink & Recipes » ရောင်းကောင်းလာတဲ့ ကော်ဖီမစ်တွေ
Posted by susunosuki on Apr 22, 2010 in Food, Drink & Recipes, Other - Non Channelized |5comments
Myanmar susunosuki ရေးတဲ့စာ.. အစားအသောက်
ပြည်တွင်း အကြွေရှားပါးမှု့ကို အရင်ကလက်လီဆိုင်တွေ ရောင်းချရာမှာ ချိုချဉ်များပေးလို့ပဲဖြစ်ဖြစ် လိုအပ်တဲ့ ပစ္စည်းတစ်မျိုးမျိုးဖြည့်ယူ စေလို့ပဲဖြစ်ဖြစ် ဖြေရှင်းခဲ့ကြပါတယ်။
အခုအချိန်မှာ တော့ ချိုချဉ်တွေ တစ်ရူးထုတ်တွေအစား တစ်ခါသောက်ကော်ဖီမစ်ထုတ်တွေ ဈေးကွက်ထဲကို ၀င်ရောက်လာပါပြီ။ ဥပမာ – အကြွေ ငါးဆယ် အမ်းဖို့ အခက်အခဲရှိတယ် ဆိုပါစို့ ၊ ကော်ဖီမစ် ငါးဆယ်တန်တစ်ထုတ် ဖြည့်ယူသွား နိုင်ပါပြီ။
လက်လီဆိုင်ရှင်တွေကတော့ ဒီလိုငါးဆယ်နဲ့ရောင်းပေးရတာဟာ သူတို့အတွက် အမြတ်အစွန်းသိပ်မရှိပေမယ့် ၀ယ်သူတွေရဲ့ အကြွေအခက်အခဲ ကိုဖြေရှင်းပေးနိုင်လို့ သူတို့အနေနဲ့ကျေနပ်ကြောင်း ပြောဆိုကြပါတယ်။
ငါးဆယ်ကျပ်နဲ့ရောင်းပေးတဲ့ တစ်ခါသောက်ကော်ဖီမစ်ထုတ်တွေကို တော့ စူပါကုမ္ပဏီနဲ့ မီကိုကော်ဖီမစ်ကိုထုတ်လုပ်တဲ့ မီကို ဖုမားကတ်တင်း တို့ကနေထုတ်လုပ်ပါတယ်။ စူပါကင်းတံဆိပ်နဲ့ ရှယ်အမှတ်တံဆိပ်များပဲဖြစ် ပါတယ်။ စူပါကုမ္ပဏီက သိပ်မကြာယခင်ကမှ ကဖီးတူးဂိုး တံဆိပ် ကို ထပ်မံထုတ်လုပ် ရောင်းချလာပါတယ်။
မီကို ကော်ဖီမစ်( ဓါတ်ပုံ-အင်တာနက်)
လက်လီဆိုင်ရှင်တွေက အရင်ကကော်ဖီမစ် ကိုပုံမှန်သောက်လေ့ မရှိတဲ့ စားသုံးသူတွေတောင် ခုလိုငါးဆယ်ကော်ဖီမစ်ထုတ်ကို အကြွေအခက်အခဲဖြေရှင်းရင်း ပုံမှန်ဝယ်ယူလေ့ရှိလာကြောင်းပြောကြပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ဆင်ခြေဖုံး လိုနေရာတွေမှာ ပိုမိုရွေးချယ်ကြကြောင်းသိရပါတယ်။
ငါးဆယ်ကျပ်နဲ့ရောင်းချပေးတဲ့ စူပါကင်း ကော်ဖီမစ်ထုတ် များဟာဆိုရင် အရင်ကနာမည်ကြီး တံဆိပ်တွေရဲ့ ရောင်းအားကို အချိန်တို အတွင်းမှာ ဖြတ်တတ်သွား ကြောင်းပြောကြပါတယ်။ ။
Soe Moe has written 42 post in this Website..
View all posts by susunosuki →
” ဆားများ စားရတယ်ကိုမရှိဘူး ဟင်းထဲခတ်တာနဲ.ကုန်သွားတာဘဲ”နဲ.တူနေပါတယ်။
ပြည်တွင်းဖြစ်ကို ဘိုနာမယ်တွေပေးလို.(စူပါ စူပါဝမ်း ဂိုးရိုစ် မီကို ဆီနိုဒါ အစသဖြင်.ပေါ.) အချင်းချင်းပြိုင်နေကြတဲ. မြန်မာပြည်ရဲ. ကော်ဖီမစ်ဈေးကွက်ကို ယိုးဒယားက
၀င်လာတဲ.ကော်ဖီမစ်အတောင်.လေးတွေက တစ်ထုပ် တစ်ရာကျပ်နဲ.၀င်ရောင်းပြီး အလဲထိုးတာ မြန်မာ.ကော်ဖီမစ်ဈေးကွက်ကြီးက ခံလိုက်ရပါတယ်။
အဲသည်ကျမှ အပြီုင်အဆိုင်ဈေးတွေလိုက်ချလို. နိုင်ငံခြားက ကော်ဖီနောက်ကို အပြိုင်လိုက်ယူကြရပါတယ်။
ခုလဲ ရောင်းရတယ်ဆိုလက်မ မထောင်ပါနဲ.အုံး။
ယိုးဒယားက ကော်ဖီမစ်အတောင်.လေးတွေကို မယှဉ်နိုင်သေးပါဘူး။
မြန်မာပြည်ထဲကိုရောင်းတဲ. ကုန်တံဆိပ်ကို မြန်မာနာမည်လှလှလေး မပေးရဲတာကိုတော.စိတ်နာတယ်ဗျာ ထူထောင်တဲ. လုပ်ငန်းပိုင်ရှင်တွေကိုပါ။
ကျွန်တော်ကတော့ Rich အနက်ကို တစ်နေ့အနည်းဆုံးငါးထုပ်သောက်တယ်။ ဘာရောဂါရနိုင်လဲတော့မသိပါ။ သိတဲ့လူ သတင်းတစ်ပုဒ်လောက်တင်ပေးကြပါလား။
တစ်နေ.ငါးထုပ်သောက်တော့ သေချာတာကတော့ ဆီးချိူဖြစ်နိုင်တာပေါ့ ကိုwailynnoo ရာ လျော့သောက်ပေါ့ ဟဲဟဲ
တခြားတော့ မသိဘူး ကော်ဖီမစ်တွေက တော့ အုန်းသီး အခွံတွေ ကြိတ်ပြီး ရောတယ် ပြောသံကြားဘူးတယ် ချက်ချင်း လက်ငင်း အကျိုးကတော့ ကော်ဖီ သောက်ပြီး ၁နာရီ ၀န်းကျင် ပထမဆုံး ဆီးသွားတဲ့ အချိန်မှာ ကော်ဖီ အနံပါလာတယ် ဆိုးကျိုးတော့ မသိဘူး။